६ महिने बालकले वाटर स्किइङ गरेर बनाए विश्व कीर्तिमान ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
पछिल्लो समयमा अमेरिकाको एक ६ महिनाका बालकले वाटर स्किइङ गरेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । अमेरिकाको राज्य उटाहस्थित लेकर पावेलका रिच हम्फ्रीज सबैभन्दा कम उमेरमा वाटर स्किइङ गर्ने पहिलो बालक बनेका छन् ।
भिडियोमा देखिए अनुसार ती बालकले बोटबाट कनेक्टिड आइरन रडलाई बेस्सरी समातिरहेका छन् । यस्तै अर्कोतर्फ उनका पिता अर्को डुङ्गामा सवार छन् र उनले बच्चालाई हेरिरहेका छन् । ती बालकले लाइफ ज्याकेट पनि लगाइरहेका छन् ।
यो भिडियोलाई ट्वीटरमा पनि सेयर गरिएको छ । सोसल मिडियामा मानिसहरुले विभिन्न प्रकारका कमेन्ट दिइरहेका छन् । केहीले वाटर स्किइङ गर्नका लागि बालकको उमेर निकै कम भएको बताएका छन् भने कतिले उनका पिताले पूरा सुरक्षाका साथ बच्चालाई पानीमा राखेको भन्दै तारिफ पनि गरेका छन् ।एजेन्सी
लागुऔषध सप्लाई गर्ने बिरालो हिरासतबाट भागेपछि…!
पछिल्लो समयमा लागुऔषध ओसार पोसार गर्न अनेक तौरतरिका अपनाउन थालेका छन् । लागुऔषध तस्करीले परेवालाई